Igumbi elingaphambili eduze kwe-UNC kanye nedolobha laseChapel Hill - I-Airbnb
Igumbi elingaphambili eduze kwe-UNC kanye nedolobha laseChapel Hill
Chapel Hill, North Carolina, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Bibb
U-Bibb uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Leli gumbi elinokugeza okuyimfihlo litholakala esitezi sesibili sendlu yomlando. Amafasitela amakhulu ezinhlangothini ezimbili zegumbi alenza likhanye futhi lijabule. Ikhishi elihlanganyelwe kanye nendawo yokudlela ingaphandle nje komnyango.
I-Front Room inombhede onethezekile wosayizi ogcwele onamalambu okufunda phezu kwengubo engemuva kombhede. I-futon sofa ivumela abantu abengeziwe abangu-2 ukuthi bahlale ekamelweni. I-closet ekhoneni ivumela isitoreji esilula nesanele. Igumbi lokugezela elincane kakhulu le-en-suite liqedela izinsiza.
4.65 out of 5 stars from 79 reviews
4.65 · 79 okushiwo abanye
... Eduze ne-UNC, inyuvesi yomphakathi endala kunazo zonke esizweni, Isikhungo siyibhulokhi engu-1/2 ukusuka e-Carolina Inn, i-Global Education Center, kanye neSikole Sezempilo Yomphakathi, kanye nemizuzu engu-10-20 ukusuka esibhedlela, ezikoleni zezokwelapha. , nekhampasi eyinhloko, okuhlanganisa iSikhumbuzo Hall, Playmakers Theatre, Ackland Art Museum, Kenan Stadium, kanye neDean Dome.
... Amabhlokhi amabili enyakatho iyinkaba yomgwaqo uFranklin, indawo edonsayo yase-Chapel Hill, enezitolo zezingubo, izitolo zezincwadi, amabha, izitolo zekhofi, izindawo zomculo, itiyetha yamamuvi, kanye nezindawo zokudlela eziyishumi nambili konke okukuhambo lwemizuzu eyishumi nanhlanu.
... Uhambo lwemizuzu engu-20 endleleni yezinyawo egandayiwe eduze kukaloliwe wesitimela kukuyisa edolobheni laseCarrboro kanye ne-Weaver Street Coop, ngesikhathi sasehlobo udla ama-brunch otshanini ngomculo obukhoma.
.... Lesi sikhungo sisenkabeni yesinye sezifunda ezimbili ezingokomlando e-Chapel Hill, lesi sikhungo siphinde sinikeze amathuba amahle okuhamba ngekhampasi nasezindaweni ezinhle zokuhlala enyakatho nasentshonalanga.
... Imigwaqo yaseMcCauley kanye neVance ikakhulukazi inezindlu zozimele ezinezitezi ezimbili ezinamavulandi amboziwe. Njengoba kungekho emigwaqweni, ithrafikhi ngokuyinhloko ngabagibeli bamabhayisikili nabahamba ngezinyawo, abanengxube ehlukahlukene yabafundi abathole iziqu, abafundi abaneziqu, ubuhlakani kanye nabathathe umhlalaphansi abahlala endaweni.
... Umninikhaya wakho uhlala esakhiweni esiseduze futhi angaphakamisa izinto ongazenza, izindawo ongaya kuzo, futhi aphendule yonke imibuzo ongase ube nayo.
... Ungase uhambele imicimbi eSikhungweni Sesayensi Yesintu
... Noma ungahlala wedwa, ngokuthanda kwakho.
... Uzoba negumbi elinokhiye ngamunye.
... Ungase uhambel…
Isikhathi sokuphuma: 22:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Chapel Hill namaphethelo